Sababta Dhabta Ah Ee Keentay In Xiddiga Real Madrid Ee Luka Jovic Uu Lug Ka Jabay & Magaalada Uu Markaas Joogay Oo Banaanka Lasoo Dhigay - Gool24.Net
Sababta Dhabta Ah Ee Keentay In Xiddiga Real Madrid Ee Luka Jovic Uu Lug Ka Jabay & Magaalada Uu Markaas Joogay Oo Banaanka Lasoo Dhigay
12/05/2020 Apdihakem Omer Adem
Il-wareedka ree Serbia ee Daily Kurir ayaa shaaca ka qaaday xog cusub oo la xidhiidha dhaawaca weeraryahanka kooxda Real Madrid ee Luka Jovic kaas oo ay dhawaan kooxdiisu shaacisay inuu gaadhay dhaawac jabniin ah oo lugta ahi.
Jovic ayaa suuqii xagaaga ee 2019 dhinaca kooxda ree Germany ee Frankfurt ugaga soo biiray Los Blancos balse kuma uusan soo guuleysan kalsoonida tababare Zinadine Zidane isagoo inta badan xilli ciyaareedkan kursiga keydka deris la ahaa.
Jovic oo uu saarnaa cadaadiskaas la xidhiidha qaab ciyaareedkiisa ayaa markale dhibaato dhex fadhiistay mudada lagu gudo jiray karantiilka xanuunka Korona kaddib markii uu sharciga ah in guryaha la joogo jabiyay xilli uu dhaliilo kala kulmay madaxda dalkiisa.
Si kastaba, Wargeyska Kurir oo hadal kasoo xigtay shaqsi ku dhaw Jovic ayaa shaaca ka qaaday in ugu horreynba dhaawaca Jovic uusan ahayn mid ku gaadhay magaalada fadhiga u ah kooxdiisa ee Madrid balse uu joogay caasimada dalkiisa Serbia ee Belgrade.
Dhinaca kale wargeyska ayaa shaaciyay in sababta keentay jabniinkan lugta ah ee Luka Jovic ay tahay inuu gidaar kasoo dhacay sidaasna uu ku jabay.
“Isagu dhab ahaan waxa uu dhaawacay naftiisa, isagu waxa uu kasoo dhacay gidaar, dhab ahaantii ma garanayo si aan u sharaxo mana garanayo sida ay u dhacday, asaasi ahaan waxaan filayaa inay shil ahayd” ayuu sheegay shaqsiga laga waraystay Kurir.